News Collection: उकालिँदै 'डिप्रेसन'
काठमाडौ, जेष्ठ २१ - 'डाक्टरसाब ! मलाई 'डिप्रेसन' भएजस्तो छ' ! भन्दै एउटा २१ वर्षे कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी ओपीडीमा आए । म त एकैछिन असामञ्जस्यमा परें । एक मनले सोच्यो, मानसिक रोगप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण त परिवर्तित भइरहेको रहेछ । आफूलाई 'डिप्रेसन' भएको भनेर कुनै विद्यार्थी सिधै मनोचिकित्सककहाँ नै आउनु सकारात्मक हो । तर अर्को मन, 'कस्तो जरा गाडेको रहेछ डिप्रेसन' ले यो समाजमा भन्दै गम्भीर चिन्तन गर्न थाल्यो ।
'डिप्रेसन' साँच्चै नै मानसिक रोगको प्रमुख प्रकार मानिए पनि जनजिभ्रोमा एउटा लाक्षणिक अर्थका रूपमा 'मानसिक रोग' को नै पर्यायवाची भएर रहेको छ । यसको ठेट नेपाली अर्थ खोज्न शब्दकोश नै पल्टाउनुपर्ला तर 'डिप्रेसन' कै रूपमा जनमानसमा प्रचलित रहेको हुँदा यही नै शीर्षक कायम राखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २००१ को सर्भेक्षणअनुसार अहिले 'डिप्रेसन' रोगहरूद्वारा हुन सक्ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक दुष्परिणामको पंक्तिमा चौथो स्थानमा रहेको छ । तर यसरी नै वृद्धि हुने क्रममा रहिरह्यो भने सन् २०२० सम्ममा यो 'मुटुरोग—हृदयाघात' पछिको दोस्रो नम्बरमा पुग्न सक्नेछ भनेर प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । अतः 'डिप्रेसन' एक डरलाग्दो समस्याका रूपमा रहेको बोध हुन जान्छ, ँ'मुटुरोग' जत्तिकै संवेदनशील ।
विश्वव्यापी सर्भेक्षणले महिलामा पुरुषहरूभन्दा झन्डै दुई गुणा बढी 'डिप्रेसन' हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ, यसको जीवनभरिको सम्भावनाको अनुपात पुरुषमा (८—१२) अनि महिलामा (२०—२४) मानिएको छ । महिलामा बढी हुने कारक तत्त्वहरूमा मासिक रूपमा महिनावारीको समयमा हर्मोनहरूमा -इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन) आउने उतारचढाव र त्यसको मनोवैज्ञानिक असर, गर्भवती र प्रसूतिको समयमा आउने शारीरिक, रासायनिक एवं मानसिक परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्रमा नियमित आइपर्ने जिम्म्ोवारीमा हेरफेर -छोरी, श्रीमती, बुहारी, जेठानी, देउरानी, नन्द, आमाजू, आमा, सासू), गृहावस्थाका समस्या, कामकाजी महिलाहरूमा रहने कार्यबोझ आदि पर्छन् ।
'डिप्रेसन' लाई खालि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आँखाले मात्र नहेरी कुनै पनि अन्य दीर्घरोगहरू -जस्तैः मधुमेह, रक्तचाप) लाई झैं समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्ने हालसालैका शोधहरूले देखाएका छन् । न्युरोट्रान्स्िमटर रसायनहरू -जस्तैः सेरेटोनिन, डोपामिन, नर्अाडि्रनालिन), मस्तिष्कका अवयवमा हुने परिवर्तन अनि अनुवांशिक गुणहरू सबैले यसमा प्रभाव पारेका हुन्छन् । त्यसैले यसको उपचारमा पनि बहुआयामिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
चिन्ता लाग्ने, हीनताग्रन्थि प्रबल हुने, उत्साहउमंगमा कमी आउने, सोच्ने शक्तिको ह्रास हुने, खानामा अरुचि, निद्रामा गडबडी, तौलमा हेरफेर, मृत्युकै विचार आइरहने र आत्महत्याको प्रयास गर्ने आदि लक्षण यसमा देखिन्छन् साथै शरीरका अंगहरू दुख्ने, कमजोरी महसुस हुने, आलस्य छाउने, काम गर्ने रुचिमा कमी आउने, चिडचिडाहट बढ्ने, शंका बढी लाग्ने आदि पनि हुन सक्छ । लक्षणका आधारमा 'डिप्रेसन' लाई सामान्य, मध्यम अनि क्लिष्ट भनी वर्गीकरण गरिए पनि काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगी सामाजिक रूपमा अपांगैसरह हुनु र आत्महत्या प्रयास गर्नु यसका दुई प्रमुख दुष्परिणाम मान्न सकिन्छ ।
लक्षणमा थुप्रै विविधता भए पनि यदि चाँडै नै उपचार गर्न थाल्ने हो भने अरू श्ाारीरिक रोगहरूलाई झैं औषधि सेवन गरेरै यसको निदान गर्न सकिन्छ । अनेकौं वर्गका एन्टिडिप्रेसेन्ट औषधिमध्ये मनोचिकित्सकको सल्लाहमुताबिक प्राप्त उमेर सुहाउँदो औषधि खाएर यसको उचित उपचार गर्न सकिन्छ । कुनैकुनै सामान्य 'डिप्रेसन' लाई त मनोवैज्ञानिक उपचार विधिबाट मात्र पनि ठीक पार्न सकिन्छ । दीर्घ प्रकारका 'डिप्रेसन' लाई भने करेन्ट पद्धतिसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि नयाँनयाँ उपचारविधि पनि विकसित भइरहेका छन् । 'डिप्रेसन' खालि व्यावहारिक कठिनाइ या दुःखका कारण उत्पन्न हुने स्वभावजन्य क्षणिक परिवर्तन या लक्षण मात्र नभई पुनःपुनः दुःख दिइरहन सक्ने दीर्घ किसिमको मानसिक रोग हो । अन्य शारीरिक रोगझैं यसको पनि यथाशीघ्र उपचार गराउनु आवश्यक छ ।
लेखक धुलिखेल अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।